China Tablet PC Turnkey PCB အီလက်ထရောနစ်ညီလာခံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Kaisheng PCB
PCBFuture သည် PCB ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များကိုအာရုံစိုက်ပြီးလက်တွေ့ကျသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာအရည်အသွေးမြင့်မားသောအလွှာစုံမြန်နှုန်းမြင့် PCB ဒီဇိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
အခြေခံပစ္စည်း: အမြင့် Tg 170 FR-4
သတ္တုကုတ်အင်္ကျီ: HASL ခဲအခမဲ့ ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ: SMT + အလွှာများ - ၈ အလွှာ PCB
အခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်း: မြင့်မားသော Tg 170 FR-4 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: SGS, ISO, RoHS MOQ: မရှိပါ MOQ
Solder အမျိုးအစားများ - RoHS လိုက်နာမှု One-Stop န်ဆောင်မှုများ: PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် turnkey PCB ညီလာခံ စမ်းသပ်ခြင်း: ၁၀၀% AOI / X-Ray / Visual Test
သော့ချက်စာလုံးများ - PCB ညီလာခံ၊ PCB ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များ၊ PCB ညီလာခံထုတ်လုပ်သူများ၊ စျေးပေါ PCB ညီလာခံ၊ ပုံနှိပ်တိုက်ဘုတ်အဖွဲ့၏ကုမ္ပဏီများ
PCBFuture တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ရှေ့ပြေးပုံစံမှသည်အပြည့်အ ၀ ထုတ်လုပ်မှုအထိကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏စွမ်းရည်ကိုတိုးချဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းရန်သို့မဟုတ်ကျော်လွန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးအစီအစဉ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နေသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အစဉ်အမြဲကိုက်ညီစေရန်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် PCBFuture ကကတိကဝတ်ပြုထားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PCB ညီလာခံနှင့် PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှု?
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးပေါ်လစီသည်အရည်အသွေး၊ ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်စျေးနှုန်း၊ အရည်အသွေး၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၄ နာရီအွန်လိုင်းကိုးကားချက်နှင့် PCB ရှေ့ပြေးပုံစံအတွက် ၁၂ နာရီအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့သည်။ တစ်ဖက်သတ် PCB များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နှစ်ဖက်စလုံး PCB၊ Multilayer PCB များ၊ Aluminum PCB များနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PCB များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေး၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုနှင့် PCB ဖြေရှင်းမှုတို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သန္နိare္ဌာန်ချထားပါသည်။ ဒါ့အပြင်အထူးစိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေး။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် PCBFuture သည်သင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်အညီစျေးကွက်ရရန်သင်၏အချိန်ကိုသက်သာအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
single- တဖက်သတ် PCB
နှစ်ဖက် - PCB
လျင်မြန်စွာအလှည့် PCB ပရိသ
အနိမ့်အသံအတိုးအကျယ် PCB ပရိသ
အလူမီနီယံအခြေခံသော PCB ပါသော LEDs များသည်လုပ်ငန်းသုံးများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သည်။
စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းဆိုသည်မှာစမတ်ဖုန်းများ (သို့) ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်သုံးသောကိရိယာများဖြစ်သည် ရေခဲသေတ္တာ၏နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်များပင်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများပါတတ်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအတွက် implant (သို့) အရေးပေါ်ခန်းမော်နီတာအတွက်အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အထုပ်သေးငယ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PCB သည် HDI PCB ဟုလည်းရည်ညွှန်းသောအထူးမြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ interconnect PCBs ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PCB ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အခြေခံပစ္စည်းများဖြင့်လည်းပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်အတွင်းနှင့်ပြင်ပဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသုံးအဆောင်အတွင်း PCB ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေနိုင်သည်။
5. မော်တော်ယာဉ် Applications ကို
1. impedance ထိန်းချုပ်မှုသည်တင်းကြပ်သည်။ ဆွေမျိုးလိုင်း width ကိုထိန်းချုပ်မှုသည်အလွန်တင်းကြပ်ပြီးအထွေထွေသည်းခံမှုသည် ၂% ခန့်ရှိသည်။
၂။ အထူးပြားများအသုံးပြုခြင်းကြောင့် PTH ကြေးနီသိုက်၏ကော်သည်မြင့်မားခြင်းမရှိပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် PTH copper နှင့် solder mask link ကို အသုံးပြု၍ ပလာစမာကုသမှုသုံးကိရိယာများကို ဖြတ်၍ အပေါက်များနှင့်မျက်နှာပြင်ကိုမာကျောစေရန်လိုအပ်သည်။
၃။ ဂဟေဆော်ခြင်းမခံမှီပန်းကန်ကိုကြိတ်ခွဲခြင်းမပြုပါ။ သို့မဟုတ်ပါကကော်သည်အလွန်ညံ့ဖျင်း။ micro-corrosive အမှုန့်ဖြင့်သာပေါင်းစည်းနိုင်သည်။
၄။ စာရွက်အများစုသည် PTFE ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အထူးကြိတ်ခွဲစက်များလိုအပ်သည့်သာမန်ကြိတ်ခွဲစက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းသောအခါကြမ်းတမ်းသောအနားများစွာရှိလိမ့်မည်။
၅။ မြင့်မားသော frequency frequency circuit board သည် electromagnetic frequency မြင့်သောအထူး circuit board တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဆိုရလျှင် high frequency ကို 1 GHz အထက်ရှိ frequency အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကိုအလွန်တောင်းဆိုမှုများကိုဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းကိုမော်တော်ကားတိုက်ဖျက်ရေးစနစ်၊ ဂြိုဟ်တုစနစ်၊ ရေဒီယိုစနစ်နှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ရှေ့သို့ Smart TV Box Pcb Assembly Main
နောက်တစ်ခု: Turnkey စျေးပေါ PCb ညီလာခံ
Turnkey PCB အီလက်ထရောနစ်